I-TrovaWeb umi phambili ku i-mare magnum yezinkampani zaseSicily ngenxa yezizathu eziningi esivele sinethuba lokuphenya. Kepha kunesinye isici sokwehlukanisa emuva kwempumelelo yalesi sibongiwe Ukuqalisa kweSicilian.
Ukulingana kobulili nezinkampani eziphumelelayo: inhlanganisela yokuwina
Sesikhulumile ngakho amakhono abesifazane okuyisisekelo sempumelelo yabaningi izinkampani, izinkampani e qalisa. Isibonelo sayo yonke inhlonipho yi-TrovaWeb yaseSicily engokoqobo ezinzile zayo'usomabhizinisi UCaterina Doddis. I-Innovative Technological Startup, iTrovaweb yaziwa kulo lonke elase-Italy ngemisebenzi yayo esebenza kahle ukubonakala kwewebhu e ukuma okuhle. Ukuzimisela, umuzwa wokunakekelwa, uzwela, ukulalela kanye namakhono amakhulu okuhlela yilezi zimfanelo ezijwayelekile ezikwenzile I-TrovaWeb iqiniso umniniyo kanye nabahlanganyeli abaziqhenyayo ngalo namuhla. Futhi ezinye eziningi ziyizizathu zale mpumelelo.
I-GetWeb iphikisana nokuphambuka ku-Gender Pay Gap
Il I-Gender Pay Gap kunjalo Igebe lokukhokha ngobulili okusaqhubeka kwenzeka ezinkampanini nakumabhizinisi noma nini, ngamakhono afanayo, nakho, umthwalo, iziqu kanye neziqu, umfazi uthola umholo ophansi kulowo osebenza naye wesilisa. Leligebe lilinganiswa minyaka yonke kusukela Umbiko Womkhawulo Wobulili Bomhlaba, Umbiko wonyaka obheka ukuthi abantu bayawemukela yini ukwelashwa okulinganayo futhi uma benokufinyelela okulinganayo kokuthola izinsiza namathuba, kungakhathalekile uhlobo. I-Italy ingezansi kwalesi simo, ihlala ihlala njalo ukuthambekela okungalungile okusibiza kakhulu ngokuya I-PIL futhi, ngasikhathi sinye, kuvimba ukukhula nakho inqubekela phambili kwezomnotho yezwe lethu.
Unekhwalithi njalo emqondweni: ITrovaWeb ikhetha abahlanganyeli ngesisekelo sekhono nekhono
I-TrovaWeb bheka amakhono namakhono omuntu lowo lapho ukhetha abantu abazobamba ikusasa labo Qalisa ethembisa ukwedlula kuwebhu. Amakhono wedlulaubulungu futhi zibonakalise ngaphakathi amakhono ngamanye, ngekhono lomuntu siqu, emiphumeleni, ku Kanzima e soft amakhono. Kulokhu, abasebenzi bakwaTrovaweb bakhethwa kuphela ngesisekelo samakhono, ukusebenza ngempumelelo, iziqu namakhono wangempela abonakala emiphumeleni nasezimeni isivuno sansuku zonke. Futhi i khokha kukhombisa amakhono kanye nokuhlangenwe nakho kwangempela komhlanganyeli ngamunye, kungakhathalekile ubulili babo. Iningi labasebenzi abaqalayo ngabesifazane futhi cishe bonke ubuholi Kwenziwa ukusetshenziswa kwe abesifazane abanethalente kakhulu nekhono, elibonisa nsuku zonke ngemiphumela ekhonkolo ukuthi bakulungele ini.
Ukufisa amakhono womuntu ngamunye: le yindlela iTrovaWeb ehlukanisa ngayo iGap Gender
Il umgomo wokungabandlululwa kuyingxenye yemvelo yezinqubomgomo zebhizinisi ze Messina ukuqala: lapha kuphela futhi kukodwa kubukwa amakhono akho, amava kanye nokuthi asetshenziswa kanjani emsebenzini wansuku zonke, umkhiqizo kanye nokuzibophezela. Izimfanelo, isipiliyoni, amakhono kanye nokuqeqeshwa kubhekelwa kakhulu, ikakhulukazi lapho kukhonjiswa endle ngemiphumela. Futhi bakhokhelwa ngokulingana nangokufanele. I-TrovaWebNgalesi sizathu, kungaba nokuziqhenya ngokuba yingxenye yalawo maqiniso webhizinisi anciphisa i Igebe Lokulingana. Siphinde futhi sizibonakalise siyiphayona esimweni esihle salo ukuthuthukiswa komnotho nezenhlalo yezwe.
Tags: izinkampani Izindaba thola